Photo: nosipho mkhize UMnuz Alred noMnuz Elliot bephethe ama Wheelchair abawanikelelwe inhlangano yeze politiki i-ANC ese Thekwini.
INHLANGANO elekelela umphakathi eyaziwa ngokuthi i-Enhlanhleni Isibani Sezwe ibe nomcimbi wama Siko ngeledlule, lapho bekubonakala amalungu ayo egqoke imvunulo yesiZulu.
Okhulumela le nhlangano uMfu Alfred Ntshangase uthe lo mcimbi ubunga bhekisiwe ekwazini iSiko kepha bekuwumcimbi wokufundisa intsha ngokuningi.
Uthe: “Kulo mcimbi besi meme izinhlangano ezehlukene zomphakathi kubalwa ama phoyisa, imitholampilo nomphakathi. Siphinde saba nohlelo lapho sixwayise umphakathi ikakhulukazi intsha ngokusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni. Simeme nezikhulumi zosuku ezinezezele ezinkulumweni zokuxwayiswa ngezidakamizwa. Sinikelele ngama- wheelchair amabili avela kwabakwa-ANC eThekwini. Sibonga nabo nonke abasixhasile kulo mcimbi obe yimpumelelo.”
Uqhube wathi njengoba engumfundisi webandla lase-zion elibizwa ngokuthi yi-Enhlanhleni Phillipian Church, ukholelwa ekusizeni abantu, ngakho kwabonakala kukuhle ukuthi ibandla liqale le nhlangano emva kokuba kutholwe ukuthi izingane ezikusonto skole ziqhamuka emakhaya ampofu.
“Le nhlangano iqale ngo-2002 emva kokuba sibone izingane zika sonto skole ziphuma emakhaya antulayo. Iningi lalezi zingane zihlukumezekile ngenzindlela ezahlukahlukene, ezinye ziyizi ntanda kuthi ezinye zinesifo zesandulela ngculazi.”
“Le nhlangano ayigcini nje ngokusiza izingane ezibhalise ngaphansi kwayo kodwa nomphakathi uyafika nezinkinga futhi siyabalekelela ngoba asikholelwa ekutheni sixoshe umuntu odinga usizo. Yize siphakela izingane eziyi-126 kodwa sigcina sesisiza abantu abafikile ku-1000.”
Uthe kuningi okunye le nhlangano ezibandakanye kukhona.